2 Ụzọ Nyefee Photos si iPod ka iPad na site na iPad ka iPod
2 Ụzọ Nyefee Photos si iPod ka iPad, na site na iPad ka iPod
Synching na-ebufe foto site na iPod ka iPad, ma ọ bụ site iPad ka iPod nwere ike iyi ihe na-akụda ọrụ. N'ihi na onye na-azọrọ na-kpamkpam na ngwaọrụ ma internet savvy, ọrụ a ga-apụta na-erughị ihe ịma aka. Iji mee ka ihe mfe, a abụọ mfe ụzọ na otú ọma na-adị mfe iji Wondershare MobileTrans na Photo Stream nyefee foto site na iPod ka iPad nakwa site iPad ka iPod.
Method 1. Iji MobileTrans nyefee Pictures si iPod ka iPad na site na iPad ka iPod na 1 Pịa
Method 2. Iji Photo Stream nyefee Photos si iPad ka iPod na site na iPod ka iPad maka Free
Nyefee foto ndị si iPod ka iPad, na site na iPad ka iPod, na otu Pịa.
E wezụga photos, music, kalenda, video na kọntaktị, iMessages nwere ike zigara kwa.
Full dakọtara na iPad ikuku, iPad na Retina ngosi, iPad 2, iPod aka 5 na ndị ọzọ na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6/5.
Nzọụkwụ 1. Wụnye na Run MobileTrans on Computer
Nke mbụ niile, download na wụnye nri version nke MobileTrans on PC ma ọ bụ Mac. Na-agba ọsọ ya. Jiri eriri USB jikọọ ma iPad na iPod aka ka PC ma ọ bụ Mac. Gị iPad na iPod aka ga-adịghị anya ghọtara. Ke akpan window, họrọ Photo na ekwentị Nyefee mode. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ ma iPad na iPod na-egosi na e nwere.
Cheta na: iPod ebe a na-ezo aka iPod aka. Wondershare MobileTrans Nkwado iPod aka 5/4/3-agba ọsọ na iOS 9/8/7/6/5.
Nzọụkwụ 2. Copy Photos si iPod ka iPad na site na iPad ka iPod na 1 Pịa
Dị ka ị na-ahụ, faịlụ niile nwere ike zigara bụ tickes. Iji nyefee photos nanị, ị nwere ike wepụ akara tupu ndị ọzọ faịlụ. Mgbe ahụ, pịa Malite Detuo. Na thre dum transfer usoro, ijide n'aka ma ngwaọrụ kwesịrị ejikọrọ oge niile.
Nhọrọ 1. Mee Up akpaka Photo Nyefee n'etiti gị Devices
1. On gị iPad ma ọ bụ iPod, igba egbe Ntọala. On a na ihuenyo, i kwesịrị anya maka Photos na igwefoto nhọrọ. Gaa My Photo Stream na-atụgharị a nhọrọ NA, nke ga-eme ka Nyefee na synching foto gị na-na ngwaọrụ ọzọ mfe ebe ọ bụ na a ga-eme-akpaghị aka. Iji jide n'aka na gị iPod kwesịrị ekwesị nke bụ jikọrọ, na-agbaso otu nzọụkwụ kwuru n'elu.
2. Sign na iCloud na ma iPad na iPod. Na gị iPad na iPod, pịa Ntọala ngwa, na mgbe ahụ họrọ iCloud. Ị nwekwara iji jide n'aka na i nwere a na-arụ ọrụ Apple ID aka iwu a.
Nhọrọ 2. melite gị Devices Iji aka họrọ na nyefee Photos onye ọ bụla ọzọ
Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị a họrọ nọmba ma ọ bụ collection nke foto na-enyefere gị iPod ka iPad ma ọ bụ Anglịkan, ị ga-tasked ime nke a aka site na-eke a foto iyi iwu n'ihi na nke a:
1. mbụ, ị ga-ego ma ọ bụrụ na Photo Stream nhọrọ e nyeere na ma gị iPad na iPod. Ịnwere ike iji aka setịpụrụ a elu site na ịnweta Ntọala> Photos na igwefoto> Shared Photo iyi na-atụgharị ya.
2. kwesịrị ekwesị melite gị onwe gị Photo Stream ịkọrọ ma ọ bụ nyefee gị foto gị iPod ma ọ bụ gị iPad ka onye nke ọzọ. Ebe a, m na-atụ na otú nyefee foto site na iPod ka iPad. I nwere ike ime nke a site na-eso ndị a:
Access Photos ngwa gị iPod.
Kpatụ Photo Stream nhọrọ (Ọ bụ na a kehoraizin mmanya)
Kpatụ + button emi odude ke uppermost n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo. Nke a ga-ekwe ka gị ike na gị onwe gị Photo Stream.
Họrọ na pịnyere a gị aha Photo Stream na iti Mepụta. Ị nwekwara ike ikpebi ma ị ga-amasị gị Photo Stream-abụ dị ka ọha na eze ma ọ bụ.
3. Ị ugbu a na-amalite na tinye foto gị Photo Stream.
Enweta Dezie na-enwe ike iji họrọ foto ị ga-achọ ịkekọrịta ma ọ bụ nyefe.
Họrọ Photo Stream na popup menu na họrọ onye ị ga-achọ ka gbakwunye foto.
Jikwaa foto gị iyi site na-agbakwụnye ọzọ ma ọ bụ ihichapụ photos.
4 Ụzọ iji Hichapụ iPad Photos
Nyefee iPhoto ka iPad mfe
Nyefee Photos si iPad ka Mac
A Full Guide Ka idetuo Photos si iPhone ka iPad
Bugharịa Photos si Mac ka iPad
3 Ụzọ nyefee Photos si iPad ka PC
3 Ụzọ nyefee Photos si PC ka iPad
Top 7 iPad Photo Editting égwu
Top 5 igwefoto maka iPad égwu
Top 5 iPad Photo Nyefee égwu
Best 10 iPhone Photo Nyefee Software
Top 10 iPhone apps Ime File Nyefee-ejighi eriri
Top 10 Photo Nyefee ngwa ọdịnala n'ihi iPhone na iPad
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPad Photos
Otú nyefee Photos si iPhone ka iPad na ndị ọzọ nile Files
Senuti maka Mac - The Best Ngwá Ọrụ naghachi Music si iPod & iPhone
Top Senuti maka Windows Mmemme naghachi Music si iPhone na iPod
PC ka iPhone Nyefee: Nyefee Music, Photos na Ndi ana-akpo Mfe
3 Ụzọ nyefee Video Site iPhone ka iPad
Ikuku nyefee gị Video Files: Olee otú Ọ na-arụ ọrụ
Olee otú ndabere Nokia Ndi ana-akpo, SMS, Music, Video, Photos na Ọzọ na 1 Pịa
Nyefee na Ndi ana-akpo si iPhone ka LG Optimus
Otú nyefee Data Site na otu na ekwentị ọzọ
Gịnị na-eme ọ bụrụ na ngwaọrụ Ada Ada Iji jikọọ Wondershare MobileTrans
Olee otú ka Wepụ oyiri iPhoto Photos Mfe
> Resource> Nyefee> 2 ụzọ nyefee Photos si iPod ka iPad na site na iPad ka iPod